Amakhosi alushayela ihlombe uhlelo lokuwathuthukisa kwezemfundo – Ubukhosi
Home/ Amabhuku/Amakhosi alushayela ihlombe uhlelo lokuwathuthukisa kwezemfundo
Alinganiselwa emashumini ayisihlanu nesithupha-56 Amakhosi aphothule izifundo zokuhola nokubusa, iLeadership and Good Governance Programme eNyuvesi yaKwaZulu-Natal.
Lolu hlelo luqale ngonyaka ka-2011 emva kokuthi uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana wakha amaxhama okusebenzisana neNyuvesi yaKwaZulu-Natal ukuthuthukisa amakhosi kwezokubusa. Lokhu phela kuyingxenye yomkhankaso kaHulumeni waKwaZulu-Natal wokubuyisa nokuthuthukisa isithunzisesakhiwo sobuholi bomdabu esathunazwa ohulumeni baphambilini.
Phakathi kokunye, amakhosi afunda ngezigaba zikahulumeni nokwakheka kwazo. Aphinde afunde kabanzi ngomthetho sisekelo ukuze amakhosi kukho konke akwenzayo enze isiqiniseko sokuthi akushayisani nawo. Kugxilwa futhi kakhulu nasemithethweni eyengamele ohulumeni basekhaya njengoba besondelene namakhosi, ezokuphatha jikelele, ezentuthuko, nokuphathwa ngendlela kwezimali.
Kumanje nje angamashumi ayisishagalolunye nanye-91 amakhosi asethweswe iminyezane kulolu hlelo. Ngenxa yemiphumela yalo emihle, sekuheheke nezifundazwe ezifana noMpumalanga ngokunjalo ne Mpumalanga Koloni. Emcimbini wakamuva wokwethwesa iminyezane obubanyelwe eMayville eThekwini, phakathi kwamakhosi abethweswa iziqu bekuyiNkosi uNgangomhlaba Mathanzima. Le nkosi neyaziwa izwe lonke idabuka esifundazweni saseMpumalanga Koloni. Ithi yakuthakasela kakhulu ukuba yingxenye yalolu hlelo.
“Uhulumeni ubukeka ezimisele ngempela ukuthuthukisa abaholi bomdabu. Siyakubonga ukuthi ukuqonda kahle kamhlophe ukuthi uma eshiye amakhosi ngemuva kothatha isikhathi ukuthi izindawo zasemakhaya zithuthuke. Sibonge kakhulu nakuHulumeni wesiFundazwe saKwaZulu-Natal ngokuqhamuka nalomqondo. Ngizizwa ngehluke kakhulu kunakuqala ngolwazi,” kusho uMathanzima.
Ethula inkulumo yakhe kulomcimbi uNgqongqoshe Wezokubusa ngokuBambisana uNomusa Dube-Ncube wanxenxa amakhosi ukuthi angawayeki amathuba anjengalawa ngoba azohamba ibanga elide ukuthuthukisa izizwe zamakhosi. “Sikholelwa ukuthi izikhathi amakhosi akithi abusa ngazo ziguquke kakhulu. Kubalulekile-ke ukuthi ahlome ngokwezemfundo. Ukuhloma kwenkosi ngezikhali zemfundo kusho ukuhloma kwesizwe sonke. Kulezi zifundo amakhosi awakhokhi ngisho indibilishi nokuyindlela uhulumeni akhombisa ngayo ukuthi uzimisele kanjani ukuwathuthukisa ukuze ahambisane nezindlela zokubusa zezikhathi zanamuhla. Kufanele futhi yazi inkosi ukuthi yimiphi iminyango okufanele kungqongqozwe kuyo ukuze kuxazululeke noma iyiphi inkinga ekhungethe isizwe. Kafuphi nje, sijabule kakhulu ukubona amakhosi emukela lolu hlelo ngobuningi bawo,” kwenaba uNkosikazi uDube-Ncube.
Okwenze kubelula kakhulu ukwenza umsebenzi wesikole emakhosini, wukuthi uMnyango wawahlinzeka onke amakhosi ngezibhala mazwi amalaptops. Amalaptops abephelekezelwa wukufundiswa kwamakhosi ukusebenzisa i-internet. Leli igxathu alikaze lathathwa phambilini ukuthuthukisa amakhosi. Lokhu kukhomba ngokusobala ukuthi uHulumeni ufuna angasaleli emuva uma kuziwa kwezobuchwepheshe.